Vatengi vakagadzirira ramangwana kubhadhara tekinoroji | ECommerce nhau
Vatengi vakagadzirira ramangwana rekubhadhara tekinoroji
80 muzana yevagari veUnited States vanotsigira iyo nzira dzekubhadhara uye matekinoroji, Vatengi chiuru vakaongororwa uye pakati pemhedzisiro yeizvi zvinotevera zvakawanikwa:
Vanenge makumi mashanu neshanu muzana muzana yevaongorori vatori vechikamu vakabhadharwa zvemagetsi kuburikidza nedhipatimendi rakananga.
Zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana zvevakabvunzwa vanofunga kuti cheki dzechinyakare dzichabviswa zvachose mukati memakore makumi maviri anotevera, uye chetatu cheava vanotenda kuti macheki achapera mumakore mashanu chete.
Vane gumi muzana chete emakambani anoenderera mberi nemapepa-based account.
54 muzana yemakambani anotenda kuti vachashandisa otomatiki yekubhadhara sevhisi kuburikidza nemaakaundi ebhangi kana makadhi echikwereti.
52 muzana vanofunga kuti kubhadhara kuchaitwa kuburikidza nekushandisa nhare.
21 muzana vanofunga iyo chaiyo mari "bitcoin" semari yakavimbika mukati memakore gumi anotevera.
"Tekinoroji nyowani munzvimbo dzekubhadhara dzinoenderera kuendesa zvimwe typing uye kurerutsa, kuchengetedzeka zvirinani, pamwe nekubatana, pamwe nekuzivisa uye nekukurumidza kuwanikwa kwemari yemari." Akadaro Pat McMonagle, director wezvekubhadhara mabasa kuViewpost.
Kuuya kwe nzira dzekubhadhara dzinokurumidza auya kuzowedzera kuchengetedzwa uye kudzora kwekudzikiswa kwemari yekunyepedzera.
Zvinoenderana nezvakabuda muongororo, vatengi vazhinji vanotarisira michina yemhando yepamusoro kuvachengetedza:
50 muzana yevakabvunzwa vanofunga tekinoroji yeminwe ichashandiswa kuratidza mukati memakore gumi anotevera.
35 muzana vakafunga kuti kuzivikanwa kwechiso chichava chinhu chakakosha chechokwadi chekubhadhara mukati memakore gumi anotevera.
32 muzana vanovimba nekutaridzika kwechiso kumagetsi ekubhadhara chengetedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushambadzira kwenhare » Vatengi vakagadzirira ramangwana rekubhadhara tekinoroji
Ecommerce, tarisa pamusika wenyika kana wepasi rose?